လေဖိအားနည်းဆဲလ် – LPC « MMWeather Information BLOG
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်း၌ ၁၂ နာရီမှ ၂၄ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်း ဖြစ်လာမည်
Leaveacomment Uncategorized ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှ 92B ရက်ပိုင်းအတွင်း မုန်တိုင်းဖြစ်လာမည်
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်တောင်ပိုင်းမှ လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST 92B သည် ဆက်လက်တည်ရှိနေပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ ချင်နိုင်းမြို့ အရှေ့တောင်ဘက် ၄၁၅ မိုင်ခန့်၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ကိုလံဘိုမြို့၏ အရှေ့-အရှေ့မြောက်ဘက် ၂၆၅ မိုင်ခန့်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုကိုးကျွန်း အနောက်တောင်ဘက် ၇၉၅ မိုင်ခန့်၊ သီရိလင်္ကာကျွန်း၏ အနီးဆုံး ကမ်းခြေမှ ၁၂၅ မိုင်ခန့်အကွာ ပင်လယ်ပြင်တွင် ဗဟိုပြုနေပြီး လွန်ခဲ့သည့် ၆ နာရီအတွင်း မြောက်-အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၆ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ပါသည်။ (ပုံ-၁ 92B နောက်ဆုံးရ တည်နေရာနှင့် ရွေ့လျားမှု အခြေအနေ)
JTWC မှ ၂၄ နာရီ ထုတ်ပြန်ချက်(ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၂၄း၃ဝ နာရီမှ ဒီဇင်ဘာလ . . . → Read More: ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှ 92B ရက်ပိုင်းအတွင်း မုန်တိုင်းဖြစ်လာမည်
One comment Uncategorized Follow up – လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST 92W
One comment Uncategorized တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်ထပ်မံ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် မုန်တိုင်း ကပ္ပလီပင်ပြင်အထိ ရောက်လာနိုင်ဘွယ်ရှိ
Leaveacomment Uncategorized ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်မှ လေဖိအားနည်းဆဲလ် 90W မုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေ အဆင့် HIGH သို့ ရောက်ရှိလာပြီ
ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST-90W သည် ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး မြိတ်မြို့ အနောက်ဘက် ၂၇၅ မိုင်ခန့်၊ ဖျာပုံမြို့ တောင်-အနောက်တောင်ဘက် ၃ဝ၅ မိုင်ခန့်၊ ကိုကိုးကျွန်းလေဆိပ်၏ အရှေ့တောင်ဘက် ၁၇၅ မိုင်ခန့် အကွာ ပင်လယ်ပြင်တွင် ဗဟိုပြုနေပါသည်။
INVEST 90W သည် အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်(ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အလယ်ပိုင်းသို့) ဆက်လက်ရွေ့လျားပြီး ပိုမိုအားကောင်းလာကာ ၂၄ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေအဆင့် HIGH သတ်မှတ်ထားပြီဖြစ်ကြောင်း JTWC မှ ယနေ့ ညနေ မြန်မာစံတော်ချိန် ၅ နာရီ အချိန် ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။(ပုံ-၁)
လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST-90W 08 Oct 2013 0600Z Location: 11.9 94.6 Winds: . . . → Read More: ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်မှ လေဖိအားနည်းဆဲလ် 90W မုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေ အဆင့် HIGH သို့ ရောက်ရှိလာပြီ
One comment Uncategorized စက်တင်ဘာလလယ်မှ လကုန်ပိုင်းအထိ ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်များ
စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက် မှ စက်တင်ဘာလကုန်အထိ မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်(ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့မြောက်ပိုင်း၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ တောင်ပိုင်းနှင့် ကပ္ပလီပင်လယ်တို့တွင်) လေဖိအားနည်းဆဲလ်များ(Low Pressure Cells) ဖြစ်ပေါ်ပြီး ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်၌ မုတ်သုန်လေအား ကောင်းလာနိုင်မည့် အခြေအနေကို GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ခန့်မှန်းပုံဖေါ်ချက်များတွင် တွေ့ရပါသည်။ (ပုံ-၁)
ပုံဖေါ်၍ ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များ၌ စက်တင်ဘာ လကုန်ပိုင်း(၁၈ ရက်နောက်ပိုင်း)တွင် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ်များပိုမို သိတ်သည်းစွာ ဖြစ်ပေါ်ပြီး ဖြစ်ပေါ်ရာဒေသ တောင်ပိုင်းမှ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်ရှိ အနောက်တောင်လေစီးကြောင်း ပိုမိုအားကောင်းစေမည့် အခြေအနေကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။ (ပုံ-၂)
စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နောက်ပိုင်းတွင် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတွင် ပိုမိုအားကောင်းသည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်ပြီး ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက် အနောက်တောင်လေစီးကြောင်း အားအလွန်ကောင်းလာမည့် အခြေအနေဖြစ်ပေါ်စေမည်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ (ပုံ-၃)
ခန့်မှန်း စက်တင်ဘာလ ၂၄ . . . → Read More: စက်တင်ဘာလလယ်မှ လကုန်ပိုင်းအထိ ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်များ